Blog of Nyein Chan Yar: 2006.11
Posted by Daythanix Chann at Monday, November 27, 2006 1 comment:
Posted by Daythanix Chann at Monday, November 27, 2006 No comments:
ဒီနေ့ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း forward လုပ်လိုက်တဲ့ email ကတော့ ဟုတ်သည် မဟုတ်သည်မသိ ဒီသတင်း အရဆိုရင် ...
နောက်ဆက်တွဲသိရသော စစ်ဘက် အသိုင်းအ၀ိုင်း သတင်းများ အရ ဗိုလ်သန်းရွေ သမီးတွင် န၀တအတွင်းရေးမှူး-၂ အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ ဗိုလ်ချုပ်တင်ဦး( တပ်တွင်းဗုံးခွဲ လုပ်ကြံမူကြောင့် ကွယ်လွန်)၏ သားဖြစ်သူ ကိုဇော်(နအဖ အသိုင်းအ၀ိုင်း အတွင်း ခေါ်ဝေါ်သော နာမည်) နှင့်ရရှိထားသော ကိုယ်ဝန်ရှိနေကြောင်း။ အဆိုပါ ကိုဇော်ဆိုသူသည် ယခင် မြို့တော်ဝန် ကိုလေး၏ သမီး နှင့် တရားဝင်လက်ထပ်ထားသော အိမ်ထောင်ရှိသူတဦးဖြစ် ကြောင်း။ သူတိုနှစ်ဦး နိုင်ငံခြားရေးဌာနတွင် အတူ အလုပ်လုပ်နေရာမှ ငြိစွန်းပြီး၊ ကိုယ်ဝန်ရရှိခဲ့ ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ။ ထိုသို့ အိမ်ထောင်ရှိသူ နှင့် ဖောက်ပြန်နေသည့်သတင်းကို ဗိုလ်သန်းရွှေသိ ရှိ ခဲြ့ပီး မျက်မာန်တော်ရှကာ ကိုဇော်ဆိုသူအား ကုန်တင်ကားဖြင့် တိုက်သတ်ရန်စီစဉ်ခဲ့ကြောင်းး။ ကံကောင်းထောက်မ၍ အသက်မသေခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ ကိုယ်တစ်ပိုင်း သေဆုံး သွားကြောင်း။ ကိုဇော်သည် Intensive Care Unit(ICU) တွင် ဆေးကုသမူခံယူရကြောင်း။ ဆေးရုံတက်နေစဉ်အတွင်း သန္တာရွှေသည် ညအခါတွင် ရုပ်ဖျက် လာရောက်ကြည့်ခဲ့ ကြောင်း။ နောက်ဆုံးတွင် ဖခင်၏အမိန့် ဖြင့် ကိုဇော်ဆိုသူအား စွန့် ကာ ဗိုလ်မှူးဖြိုးဇော်ဝင်း နှင့် လက် ထပ်ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ။ ဗိုလ်မှူးဖြိုးဇော်ဝင်းသည်လည်း ဗိုလ်သန်းရွေအား ထားရ သော လူယုံတဦးဖြစ်သည့်အပြင် ဗိုလ် သန်းရွှေ.အမိန် ကို မလွန်ဆန်ရဲသဖြင့် သန္တာရွှေကို လက်ထပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းလည်း စုံစမ်းသိရရှိရပါသည်။
မှတ်ချက်၊ ၊ သန္တာရွေနှင့် လက်ထပ်လိုက်သော မင်္ဂလာဆောင်အခမ်းအနားတွင် ဗိုလ်မှူးဖြိုးဇော်ဝင်း၏ မျက်နှာကို အစအဆုံး သေသေချာချာကြည့်ပါက ပျော်ရွှင်ကြည်နူးသည့် မျက်နှာနှင့် နှစ်သက်မြတ်နိုးခြင်း မရှိသည်ကို တွေ့ ရပါလိမ့်မည်။
(မှတ်ချက်။ ။ ဒါကြောင့် သန္တာရွှေ လမ်းလျှောက်ရင် ဗိုက်လေးနေတာကိုး၊ ဘေးတိုက်လျှောက်ရင် ပူနေတဲ့ ဗိုက်ကလေးကို ပုဝါနဲ့ ဖုံးထားပေမယ့်ပုဝါ မလုံတဲ့အခါမှာ သိသိသာလေးကိုတွေ့ ရတာ။ နောက်ဆုံး မိသားစုတွေနဲ့ ရင်းနှီးသူတွေဘဲ ဓါတ်ပုံစုရိုက်တော့ ပုဝါကို ခါးအပေါ်မှာ ချီထား လိုက်တော့ ပိုမြင်ရတာပေါ့။ ၀လို့ ဗိုက်ပူတာနဲ့ဗိုက်ကြီးလို့ ဗိုက်ပူတာကတော့ သိသာပါတယ်။)
(ရေးသားဖေါ်ပြသူ – မောင်ရှင်)
ဟီးဟီး lol rofl :D
Posted by Daythanix Chann at Monday, November 13, 20066comments:
အမြဲတမ်းလိုပဲ မblog ဖြစ်တာကိုပဲ အကြောင်းပြချက်လေးနဲ့ မစချင်တော့ပါဘူး။ မဂ္ဂဇင်က လစဉ်ပင်တိုင် စာရေးဆရာတွေဆို အယ်ဒီတာချုပ်က စာမူတောင်းလှပြီ သူကစာမရေးရသေးဘူး ဆိုတာမျိုးနဲ့ စလေ့ရှိပြီး အဲ့ဒါလေးကိုရေးတာပဲ တစ်မျက်နှာလောက်ရှိတယ်။ ကျွန်တော့်ကိုတော့ ဘယ်အယ်ဒီတာကမှ စာမူမတောင်းပါဘူး။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် အငြိမ်မနေနိုင်လို့ ရေးနေတာကိုး။ အငြိမ်မနေနိုင်လို့ရေးတယ် ဆိုပေမယ့် ကိုယ်ရေးတာလေး ဖယ်မယ့် ပရိသတ်တော့ ရှိမှကြိုက်တာပါ။ ပရိသတ်ကလည်း ကျွန်တော် ပုံမှန် update မလုပ်ရင် မလာကြတော့ဘူးပေါ့။ ထားပါတော့လေ။ အဲဒါ အဲ့သလိုမျိုး။
ဒီနေ့တော့ ရောက်တတ်ရာရာပဲ ဟိုရောက် ဒီရောက် ပြောကြတာပေါ့။
ဟိုအဖွဲ့ကို သိကြလား။ စီးရီးတစ်ခွေ စထုတ်တဲ့ ဟိုအဖွဲ့ကို ပြောတာပါ။ အူကြောင်ကြောင်တွေ ပြောနေတယ်လို့တော့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ ကြောင်တာ ကျွန်တော် မဟုတ်ပါဘူး... သီချင်းဆိုတဲ့ အဖွဲ့ရဲ့ နာမည်က "ဟိုအဖွဲ့" ပါတဲ့။ နာမည်မှည့်စရာပဲ တော်တော် ရှားကြလား မသိပါဘူး။ ထူးဆန်းပါပေ့ ဆရာတွတ်ရယ် လို့ပဲ ပြောချင်ပါတော့တယ်။
ဒီမှာဗျာ... "မီးသတ်" လို့ခေါ်တဲ့ သတ္တ၀ါတွေ ရှိတယ်။ ဒီနေ့အိမ်လာပြီးတော့ ပြောတယ်... 11am နောက်ပိုင်း အိမ်မှာ ဟင်းမချက်ရပါဘူးတဲ့။ အရပ်ကတို့ရေ ဘယ် ချိန်းဘရီး နဲ့ဒီလိုrule ထုတ်ထားကြတာလဲ။ ဒါနဲ့ မပြီးသေးပါဘူး။ ချက်ချင်ရင်တဲ့ သုံးလကို နှစ်ထောင်နှုံးနဲ့၊ တစ်နှစ်စာ ရှစ်ထောင် ပေးပါတဲ့၊ သူတို့ လာမစစ်ပါဘူးတဲ့။ အံ့ရောဗျာ။ အဲ့သလိုမျိုး တစ်နှစ် တစ်ခါလောက် တောင်းနေကျတဲ့။ ဒီနေ့ ကျွန်တော့် အမေကတော့ သုံးလစာပဲယူပါ ဘာညာနဲ့ ဈေးဆစ်ပြီး ပေးလိုက်ရပါတယ်။
ဟိုရက်ပိုင်းက သတင်းတွေအရ Saddam Hussein လည်း ကြိုးမိန့် ကျသွားပါပြီ။ ဒီလို အာဏာရှင် တစ်ယောက် ကျဆုံးတာကို ကျွန်တော်ကတော့ ၀မ်းသာပါတယ်။ အာဏာရှင် သန်းရွှေရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကတော့ စုတ်ပြတ်နေပါပြီ။ လာဘ်အစားဆုံး၊ သစ်ခုတ်အများဆုံး၊ သတင်းစာ လွတ်လပ်မှု အနဲဆုံး၊ ဘာသာရေး လွတ်လပ်မှု အနဲဆုံး၊ အင်တာနက်ရဲ့ ရန်သူ၊ အဓ္ဓမခိုင်းစေမှု အများဆုံး... စသည် စသည် စံချိန်တွေလည်း ချိုးပြီးနေပါပြီ။
ဟိုအရင်တုန်းကဆိုရင် ADSL နဲ့မို့ အင်တာနက်ဆိုတာ ကိုယ့်စားပွဲပေါ်မှာပဲလေ။ အခုဒီမှာက အင်တာနက်ကို ချောင်းကြည့်ရသလို ဖြစ်နေတယ်။ အရင်က နေ့တိုင်း မသွားရ မနေနိုင်တဲ့ Slashdot တို့ GoogleNews တို့ အခြား tech blog တွေတို့ ပုံမှန် မသွားနိုင်တော့။ seinmyoutmyout ပြောတဲ့ Popurls များသွားလိုက်မိရင် သွားရေကျစရာ link တွေအများကြီး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ blog တွေကို အလှည့်ကျ ဖတ်ပါတယ်။ comment တွေတော့ သိပ်မရေးခဲ့နိုင်တော့ဘူး။ email တွေလည်း သိပ်မရေးခဲ့နိုင်တော့ဘူး။ နားလည်ပေးကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်လျှက်...
Posted by Daythanix Chann at Sunday, November 12, 2006 1 comment:
I heard wedding video of Than Shwe’s daughter is circulating among people here. And it was also on YouTube until yesterday. People of Myanmar want to watch that video because we want to see how dictator Than Shwe and his family is wasting country’s money as their own wealth and how they were accepting bribe as “wedding gift”.
According to NDD report, the value of all wedding gifts they’ve got was around 50 million US dollars. These gifts include diamonds and other jewelries, real estate and buildings and cars and so on. And people stunned watching too much jewelries bride was wearing.
You know what. Some poor people in Burma cannot afford to eat normal meal with rice, meat, vegetable and soup like that but they can only eat “rice soup” (rice gruel). When some shops in suburb area start to sell “rice soup” (rice gruel), authorities ordered no to sell fearing international media would notice this poverty.
Are we in 21st century or Dark Age?
Link: NDD report issue 269 in pdf format. (Language: Burmese, size: 185 KB)
It's available on google now. (via 7monkeys)
Posted by Daythanix Chann at Saturday, November 04, 20063comments: